Qaybta huteelka ee iibka loogu talagalay Antigua iyo Barbuda Citizenship
Dalxiis aan caadi aheyn oo loo yaqaan 'Nonsuch Bay Resort'
Mid ka mid ah meelaha ugu raaxada badan uguna casrisan Kariibiyaanka ee ku yaal xeebta goonida ah, ee aan la daboolin ee Nonsuch Bay, Antigua. Dalxiisku wuxuu ku habboon yahay labada isqabta iyo qoysaska waana meesha ku habboon haddii aad rabto inaad iska furto oo aad iska dejiso ama aad ku raaxaysato fasax xiiso leh.
Dalxiiska 'Nonsuch Bay Resort' wuxuu ku siinayaa ikhtiyaarka ah inaad ballansato mid ka mid ah qolalka qoyskeenna u gaarka ah ee isxukunka ah ama aad u guurto mid ka mid ah guryahayaga qoysaska ee 'The Escape'. Dalxiiska 'Nonsuch Bay Resort' wuxuu ka kooban yahay afartan waasac, qolal si wanaagsan loo magacaabay iyo aqallo xeebeed leh balakoonno waaweyn oo hadh leh oo bixiya aragtiyo qurux badan oo ku saabsan xeebta kulaylaha iyo badda quruxda badan ee quruxda badan. Dalxiisku wuxuu leeyahay xeeb gaar loo leeyahay iyo sidoo kale shan xeebood oo cidla ah oo ku taal Jasiiradda Green Island ee dhow, taas oo ah doon yar oo laga raaco xeebta.
Martidu waxay aadi karaan kayaking iyo snorkelling. Buugga nonsuch Bay Antigua maanta oo u kac mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan Caribbean ee loogu talagalay lamaanayaasha iyo qoysaska.